Naya Drishti | शीतल निवास पुगेर ठाकुर र महतोले राष्ट्रपति सँग के भने ? - Naya Drishti शीतल निवास पुगेर ठाकुर र महतोले राष्ट्रपति सँग के भने ? - Naya Drishti
शीतल निवास पुगेर ठाकुर र महतोले राष्ट्रपति सँग के भने ?
वैशाख २९, काठमाडौं । नया सरकार गठनको गर्मागर्मी चलिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो शीतल निवास पुगेका फर्किएका छन्। राष्ट्रपतिले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सर्मथनमा ससरकार गठन गर्न दिएको समय घर्किन लागेका बेला उनीहरूले शीतल निवास गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले जसपाको प्रथम अध्यक्ष ठाकुर भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि प्रथम अध्यक्षकै हस्ताक्षर चल्ने भन्दै अरु कोही आए वैधता नदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए । जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम पक्ष विपक्षी गठबन्धलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा भएपनि ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिँदा तटस्थ बसेको थियो भने अर्को पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन् । उक्त समय भोलि अबेर ९ बजे सकिँदै छ । शितल निवास जानुअघि ठाकुर र महतोले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुबीच बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बालुवाटारमा एक्लाएक्लै वार्ता भएको हो। संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच याे पहिलाे भेट हाे।
ठाकुरले ओलीविरुद्ध बन्ने गठबन्धनमा साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। जसपाको ठाकुर समूहले विश्वासको मतमा आफूलाई तठस्थ राखेको थियो। जसपाकै उपेन्द्र यादव समूह भने नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सघाउन लागिपरेकाे छ। छलफलमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिबारे छलफल भएको थियो ।
ठाकुर पक्ष जसपामा आधिकारिकताको विषय उठाएर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा छ । यसको निरुपण निर्वाचन आयोगबाट टुंग्याउँदा सरकार बनाउने समय घर्किइ सक्ने र प्रधानमन्त्री ओली पुनः नियुक्त हुने वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कसको हस्ताक्षर आधिकारिक हो भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगे यो विषय तत्कालीन नेकपामा जस्तै लम्बिने छ । त्यतिबेलासम्म सरकार गठनको कोर्ष अर्कै विन्दुमा पुग्नेछ ।